फिर्ता बाट भविष्य र यसको प्रगति बाट उडान स्कूटर मलाई फुर्सद दिनुहोस्
भविष्य को लागी पछाडि बाट उड्ने स्कूटर लाई भेट्नुहोस्
गेब्रिएला मोरन | | सिइन, विज्ञान कथा फिल्म
पक्कै तपाइँ देख्नुभएको छ वा, कम से कम, को बारे मा सुन्नुभयो सफल फिलिम त्रयी फिर्ता भविष्य मा। पहिलो फिल्म १ 1985 ५ मा रिलीज भयो र बर्षको सबैभन्दा सफल बन्यो। यति ठूलो यसको सफलता थियो कि यो चार बर्ष पछि स्टीवन स्पीलबर्ग संग निर्माता को रूप मा एक सीक्वल रिलीज गर्ने निर्णय गरियो! यो ई थियोयो दोस्रो फिल्म जहाँ फिर्ता बाट भविष्य2फिल्म बाट उड्ने स्कूटर देखिन्छ।
तीन फिल्म थिए माइकल जे फक्स मार्टी McFly र क्रिस्टोफर Loyd सनकी वैज्ञानिक Emmet ब्राउन को रूप मा अभिनय। प्रत्येक फिल्म बिभिन्न युगहरुमा मुख्य पात्रहरु लाई धन्यवाद को लागी राखिएको छ DeLorian मा समय यात्रा। एक संदेह बिना, त्रयी विशेष गरी विज्ञान कथा विधा मा एक महत्वपूर्ण अग्रिम को प्रतिनिधित्व गर्दछ। तर सबै भन्दा माथि, दोस्रो किस्तले भविष्य र टेक्नोलोजिकल घटनाक्रमहरु को बारे मा धेरै अपेक्षाहरु उत्पन्न गरे, यस्तो फिल्म मा स्कूटर को मामला हो। यो नयाँ ग्याजेट को बारे मा सबै विवरणहरु पत्ता लगाउन को लागी पढ्नुहोस् र के बारे मा नयाँ छ!
1 फिल्म ब्याक टू फ्यूचर २ बाट उड्ने स्कुटर
2 फिर्ता वर्तमान मा ... श्रृंखला को 30 औं वार्षिकोत्सव मनाईन्छ!
3 के फिल्म बाट फिर्ता भविष्य को लागी उड्ने स्कूटर पहिले नै एक वास्तविकता हो?
4 अब के आशा गर्ने?
5 वर्तमान स्कूटर
फिल्म ब्याक टू फ्यूचर २ बाट उड्ने स्कुटर
नायक हो मार्टी: एक १-वर्षीय किशोर जो सधैं आफ्नो स्कूटर मा एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँमा जान्छ र उहाँ एक स्कूल संगीत समूह को हिस्सा हो जहाँ उनी गिटार बजाउँछन्। उहाँकी जेनिफर नाउँकी एक प्रेमिका छ र उसको सबैभन्दा राम्रो साथी Emmet हो, एक वैज्ञानिक जो उसलाई समय यात्रा मा लिन्छन् र ज्यादातर "डक" को रूपमा चिनिन्छन्।
फिल्म १ 1985 ५ मा सुरु हुन्छ र नायक भविष्य ३० बर्ष को यात्रा। उनीहरुलाई अक्टोबर २१, २०१५ मा एउटा मिशन पूरा गर्न आवश्यक छ!
भविष्य मा फिर्ता2विज्ञान कथा विधा मा सबैभन्दा सफल फिल्महरु मध्ये एक हो। विशेष प्रभावहरु आफ्नो समय को लागी प्रभावशाली थिए! यथार्थताहरु को रूप मा टाढा XNUMXD छविहरु, उडान कारहरु र स्कूटर कि मार्टी प्रयोग गरीयो उठाइयो।
El फिर्ता भविष्य को फिल्म बाट स्कूटर उडान एक प्रतिमा बन्यो त्रयी को प्रशंसकहरु को लागी। यातायात को यस्तो एक उपन्यास साधन संग मार्टी मुठभेड आकस्मिक थियो, यो एक कथानक को एक निश्चित भाग मा एक लडाई जित्न को लागी एक साधन थियो।
कथा को अलावा हामी भन्न सक्छौं, गलत भएको डर बिना, त्यो यस फिल्म मा सबैभन्दा सान्दर्भिक कुरा दर्शन थियो जसको साथ निर्माताहरु भविष्य को आकार। फिल्म अनन्त प्रश्न को एक सम्भावित उत्तर प्रतिबिम्बित गर्दछ: भविष्य केहि समय मा जस्तै हुनेछ?
फिर्ता वर्तमान मा ... श्रृंखला को 30 औं वार्षिकोत्सव मनाईन्छ!
भविष्य हामी संग पकडिएको छ र वर्ष २०१५ आइपुग्यो! फ्यानहरु २१ अक्टोबर को प्रतिक्षामा थिए। यो, किनभने दोस्रो फिल्म मा, त्यो संकेत मिति थियो जब मार्टी र डक को आगमन हाम्रो समय हुनेछ।
३० औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा, केही देशहरुले तीनवटा फिल्म थिएटरहरुमा पुनः रिलीज गरेका छन्। त्यहाँ पनि एक थियो डाक्टर Emmet ब्राउन बाट आधिकारिक सन्देश गाथा को प्रशंसकहरु लाई सम्बोधन गर्न र तल देखाइएको छ:
धेरै ठूलो आश्चर्य हुन सक्छ को रूप मा अपेक्षा विशाल थियो। यो एक अवसर थियो कि कम्पनीहरु को पूरा लाभ उठाउन सक्छ! यस्तो नाइके, पेप्सी र लेक्सस के साथ मामला हो। यो पछिल्लो मोटर वाहन कम्पनी पहिलो प्रोटोटाइप कि फिलिम भविष्य2बाट प्रसिद्ध उडान स्कूटर संग तुलना गर्न सकिन्छ प्रस्तुत।
के फिल्म बाट फिर्ता भविष्य को लागी उड्ने स्कूटर पहिले नै एक वास्तविकता हो?
धेरै कम्पनीहरु प्रोटोटाइप को मोडेल हासिल गर्न को लागी तरीकाले फिल्म मा स्कूटर गरे जस्तै काम गर्दछ। लेक्सस, प्रख्यात कार ब्रान्ड ती मध्ये एक हो
स्लाइड उडान स्कूटर को लागी लेक्सस को नाम हो र यो हावा मा तैरन्छ र सतह भर मा ग्लाइड गर्न सक्छ! उपकरण अवस्थित प्रविधि प्रयोग गर्दछ: चुम्बकीय उत्खनन। यही कारण हो, दुर्भाग्यवश, यो कुनै सतह मा काम गर्दैन, त्यो हो, यो मात्र विशेष चुम्बक संग पटरिहरु मा स्लाइड गर्न सक्नुहुन्छ।
स्लाइड स्कूटर तुलना को लागी ईन्धन को रूप मा तरल नाइट्रोजन संग काम गर्दछ। तेसैले एक पटक स्कूटर तातो, यो उत्तोलन गुमाउँछ र नाइट्रोजन संग रिफिल गर्न आवश्यक छ। यो उडान स्कूटर को लागी औसत उपयोग लगभग २० मिनेट छ। लेक्सस Cubelles मा बनेको छ, बार्सिलोना नजिकै एक शहर, एक विशेष ट्रयाक ताकि यो परीक्षण गर्न सकिन्छ।
यो उडान स्कूटर यो बिक्री को लागी छैन, एक क्षणकाे लागी यो मात्र एक प्रोटोटाइप हो। अन्तमा, ब्रान्ड आफ्नो स्लाइड को टेक्नोलोजिकल विकास र भविष्य को सालगिरह को लागी आफ्नो कार को लागी विज्ञापन को रूप मा प्रयोग गर्न को लागी लाभ उठायो।
अब के आशा गर्ने?
कम्पनीहरु अनुसन्धान गर्न को लागी र फिल्म बाट भविष्य को लागी लामो प्रतीक्षित उडान स्कूटर ल्याउन को लागी आवश्यक टेक्नोलोजी प्राप्त गर्न मा लगानी जारी छ।
Hendo एक कम्पनी हो कि धेरै बर्षहरु को लागी एक उडान स्कूटर को व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ कि को परियोजना शुरू भयो। यद्यपि हेन्डो होभरबोर्ड तरल नाइट्रोजन को उपयोग गर्दैन, यो अझै पनी यसको प्रक्षेपण को लागी उपयोग सीमाहरु छन्।
Hendo सामूहिक संग्रह कि पैसा को रोचक मात्रा उत्पन्न गरीएको छ। अरु के छ त प्रति स्कूटर १० हजार अमेरिकी डलर मूल्य को केहि प्रोटोटाइप बिक्री मा राखेको छ!
अनुसन्धान र विकास कार्य को लागी धन्यवाद, Hendo धेरै प्रोटोटाइप कि उहाँले सिद्ध छ विकसित गरेको छ। म तिनीहरूलाई निम्न छवि मा देखाउँछु:
त्रयी १ 80 s० को दशक मा जारी गरिएको थियो, एक समय जब स्कूटर विशेष गरी यातायात र मनोरन्जन को एक साधन को रूप मा लोकप्रिय थियो। कसैले उड्ने एक प्राप्त गर्ने सम्भावना कल्पना गर्न सक्दैन! पक्कै पनि त्रयीको दोस्रो किस्तले दर्शकहरुको दिमागमा अपेक्षाहरु बढायो। ती मध्ये केहि पहिले नै हाम्रो दैनिक जीवन को हिस्सा छन् र अन्य हुन को लागी मात्र छोटो छन्।
वास्तविकता के हो त्यो हो धेरै कम्पनीहरु को लक्ष्य मार्टी McFly द्वारा प्रयोग गरीएको एक जस्तै कार्यहरु संग एक उडान स्कूटर शुरू गर्न को लागी हो।
हामी हाल बिक्री को लागी उपलब्ध ग्याजेट्स छ र जुन धेरै लोकप्रिय भैसकेको छ: म सन्दर्भ गर्दैछु इलेक्ट्रिक स्कूटरहरू र उनीहरु फिल्म को कलाकृति बाट प्रेरित थिए।
यो एक तथ्य हो कि हामी नजिक र नजिक हुँदैछौं! यस्तो लाग्छ कि आश्चर्य अपेक्षा भन्दा चाँडो आउन सक्छ ...
लेखको पूर्ण मार्ग: मलाई फुर्सद दिनुहोस् » सिइन » भविष्य को लागी पछाडि बाट उड्ने स्कूटर लाई भेट्नुहोस्
परिवारको लागि सबै भन्दा राम्रो बोर्ड खेल
चलचित्रहरु जुन तपाइँ YouTube मा नि: शुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ (र कानूनी)